Izindaba - Ukuthuthukiswa kwamabhokisi wokukhanya wokukhangisa
Ukuthuthukiswa kwamabhokisi wokukhanya wokukhangisa
Umsuka wamabhokisi wokukhanya wokukhangisa ungalandelwa emuva ngawo-1970, ekuqaleni kweNyakatho Melika, futhi kamuva naseYurophu.
Uma kuqhathaniswa neNyakatho Melika neYurophu, umkhakha webhokisi elikhanyayo waseChina uqale sekwedlule isikhathi, futhi kusengumboni osafufusa. Kodwa-ke, imboni yamabhokisi akhanyayo yaseChina ithuthuke ngokushesha, ikakhulukazi kusukela ngasekupheleni kweminyaka yama-1990 kuze kube manje. Ngokuthuthuka okusheshayo kwemishini yasekhaya, imboni yamaShayina yokukhanya ibhokisi ingene enkathini yentuthuko esheshayo. I-China nayo ibe ngesinye sezisekelo ezibalulekile zokukhiqizwa kwamabhokisi wokukhanya emhlabeni.
Izikhangiso zokuqala zonke zazikhonjiswe ngezithombe ezidwetshwe ngezandla kumafulegi, emabhodini okusayina, ezindongeni, emigwaqweni nasemawindini ezitolo. Kusukela ekubonisweni kombhalo wokuqala, ukungeza izinto zokudweba ukufaka umbala wokuheha ukunaka kwabantu.
Kamuva, ngawo-1930, izimpawu zezitolo namawindi ezitolo aqala ukuhlanganisa imisindo, ukukhanya, namandla kagesi, kusetshenziswa amabhokisi akhanyayo, amabhokisi wokukhanya we-crystal, amabhokisi wokukhanya we-blister, njll., Futhi aqala ukufaka imiphumela yokukhanyisa ukwenza isibani sikhanya.
Kamuva, ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe, izikhangiso zangaphandle ezifana namalambu we-neon, amabhokisi okukhanya okuphequlula, nokushaywa kwamacala amathathu kwavela emigwaqweni, kuhlanganiswe nezinto ezahlukahlukene zesikrini namadivayisi alawulwa yisikhathi, futhi ngobuchwepheshe babona i- "Great Leap Forward" . Indlela ihluke kakhulu, futhi indlela yokukhuluma nayo ithuthukiswe kakhulu. Kusihlwa, izibani ze-neon ezimibalabala zenza idolobha libe lihle ngokwengeziwe.
Kamuva, ngenkathi imboni iqhubeka nokuthuthuka, ubuchwepheshe be-LED benza ukugqoza nokuthuthuka, nezikhangiso ezinkulu zedijithali ezingaphandle ezifana nezikrini ezinkulu ze-LED, i-high-definition yangaphandle, nevidiyo ye-LCD yangena kubantu. Umbala nokushesha kunika abantu umthelela oqinile wokubuka Ibhokisi lokukhanya lesitolo esilula — Manje, ibhokisi lokukhanya elinamandla nobuchwepheshe be-3D yokuqagela buzokwethulwa futhi bukhuthazwe, futhi isithombe ngeke sisaba yisimo esisodwa esimile. Ukukhanya okuqhubekayo nokuhlala kwebhokisi lokukhanya elinamandla le-LED kungathuthukisa ngempumelelo umthelela wokubuka kwabantu futhi kukhuphule izinga lokusetshenziswa kwendawo yokukhangisa yeyunithi. Umphumela wokukhangisa uyazicacela. Ingakhanya ngokuqhubekayo emini nasebusuku, futhi inhlanganisela yokunyakaza kanye ne-static idonsela ukunaka kwabantu. Amagama namaphethini ahlukahlukene agxuma ngendlela ehlelekile futhi ngokuhlukile akhombisa umthelela oqinile wokubuka, anelisa umqondo wokubuka wombukeli.
I-Blister Light Box Signboard, Izimpawu Ezikhanyisiwe, Ibhodi lokungena elingaphandle le-Light Light, Umshini Owenza Ibhokisi Elikhanyayo Lebhodi Lesibonakaliso, Izimpawu Zokukhangisa, I-Pharmacy Signboard,